Soomaali (somalisk) - Hovedportal
Download information in Somali (PDF, 130 kB)
Koroona iyo ka hortagga faafitaanka caabuqa
Dalbashada tijaabada koroonada
Dadka deeganka ah ee da´doodu ka weyntahay 18 sano iyo dadka goobayba waxa loogu deeqayaa talaalka koroonada. Talaalku waa bilaa lacag.
Xog ku saabsan talaalka
Xog guud oo talaalka ku saabsan oo luqado kala duwan oo qoraal iyo maqalba leh halkan baad ka helaysa: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
Shrikado dhowr ah ayaa sameeya talaalka-koronada. Degmeda Indre Fosen kommune waxan dadka siinaa talaalka ay sameysay Pfizer/BioNTech. Balse waxala iman kara talaalka ay Moderna sameyso iyo shirkadaha kale. Xog la turjumay oo talaalka ku saabsan halkan baad ka heli kartaa:
Talaalka caabuqa koroona - Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
Talaalka caabuqa koroona - COVID-19 Vaccine Moderna
Goorma ayaa talaalka lagu siinaya?
Talaal dadka isku mar la siiyaa ma jiroSidaa awgeed Degmadu dadka waxay talaalka ugu fidineysaa kala hormarinta xukuumaddu sameysay. Kala hormarinta waxa ugu horeyn lagu saleeyey da´. Kala hormarinta bartan baad ka arki kartaa
Sidee ballanta talaalka loo qabsada
Marka Degmadu hesho talaalka loogu talogalay dadka da´daada ah ee degmeda deggan, SMS ayaan moobilkaaga kuugu soo diraynaa. Fariintaa waxa ku qoran in aad gashan bogga intrenettka indrefosen.kommune.no/bestill. Boggan waxa aad ku gelaysaa IDga elektrooniga ah, dooranaysaa goobta iyo saacadda aad rabtid in aad qaadatid talaalka. Haddii aanad haysan ID elektroniiga ah ama siyaabo kale awgood aanad bogga elektroniiga u isticmaali karin, degmeda ayaad halkan kala soo hadli kartaa si aad ballan u qabsatid: telefoon (+47) 74 85 51 00. U sheeg hadaad u baahantahay maalintaa aad talaalka qaadanaysid turjumaan u baahantahay.
Goobaha talaalku halkay ku yaalaan?
Marka aad ballanta qabsanaysid waxa aad kala dooranaysaa Rissahallen ama Smia. Waxa kale oo aad dooranaysaataariikhda iyo saacadda. Rissahallen waa dhismaha case e ka soo horjeeda Dugsiga Åsly skole ee Rissa sentrum. Smia waxay ku dhegsantahay Dugsiga sare ee Johan Bojer videregående skole ee Leksvik.
Xasuusnow maalinta aad talaalka qaadaynaysid
Waa muhiim in aad xiliga ballanta laguu qabtay timaadid. Haddii aad xanuusatid ama siyaabo kale awgood aad ballanta u iman kari weydid, waa in aad telefoonkan u soo sheegtid (+47) 74 85 51 00.
Markaad ballanta imanaysid way fiicantahay in aad soo xidhatid dhar fududeynaaya in shaqaalaha caafimaadku si fudud gacanta dhinaceeda sare kaaga talaali karaan.
Caddayn soo qaado.
Xusuusnow ka hortagga faafidda caabuqa: Ha iman hadaad xanuusanaysid. Dadka kale masaafad u jirsato, isticmaalna afgashi. Afgashi shaqaalaha ayaa ku siin kara, haddii aanad soo qaadan.
Haddii aanad nettka ka dalban ballanta, waa in aad buuxisid foom aad xogtaada ku caddaynaysid. Foomka is-caddaynta oo luqado kala duwan ku qoran, halkan ka eeg:
Talaalka koroonada 2 jeer baa qeybinayaa. Talaalka hore marka lagu siiyo ayaa, ballanta labaadna laguu qabanayaa.
Talaalka markaad qaadatid kaddib, waa in aad fadhiisatid oo sugtid ilaa inta aad guriga ka tegaysid.. Muddoda aad sugaysid oo aad fadhiisanaysid waa laguu sheegayaa.
Waxyeelooyinka: Halkan ka akhri waxyeelooyinka iman kara iyo marka aad dhakhtarka la xiriiraysid: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
Degmeda Indre Fosen kommune wuxuu raacayaa talaabooyinka ka hortagga faafitaanka caabuqa ee heer-qaran ee xukumadda Norway soo rogtay. Halkan baad talaabooyinka oo luqado badan ku turjuman ka heli kartaa.
Waxa kale oo aad halkan ka waci karta qof luqad kale yaqaan: Nummeret er 815 55 015.
Luqadaad rabtid ayaad taabanaysaa
Ingiriisi: marka hore taabo 9 si aad doorashada luqadda u gaadhid, kaddib taabo 1
Carabi: marka hore taabo 9 si aad doorashada luqadda u gaadhid, kaddib taabo 3
Soomaali: marka hore taabo 9 si aad doorashada luqadda u gaadhid, kaddib taabo 4
Haddii koroonavirus aad xoog uga qarxo i Indre Fosen kommune, shuruuc ka adag kuwa uyaala guud ahaan qaranka Norway ayaa lagu soo rogi karaa. Bogga internettka ayaan markaa gelin doonaa xogta cusub www.indrefosen.kommune.no Hadaad kombiyuutar haysatid, bogga markaa waxad ku turjumi kartaa Google Translate, adiga oo taabanayaa «Translate» oo bogga dhinaca sare ee midig ku taal.
Calaamadihii caabuqa koroonada miyaad isku aragtay?Ka eeg xogta la turjumay ee ku saabsan calaamadaha iyo waxa aad samaynaysid hadaad xanuusatid : https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa- flere-sprak/
Tiijabada ka dalbo: Halkan ballank a qabso https://timebestilling.remin.no/indre_fosen
Haddii aanad nettka ka dalban karin, xafiiska dhakhtarka kala hadal
(+47) 41 70 24 00.
Sist endret05.07.2021 08:59